अधिकांश स्थानमा मतगणना सुरु
काठमाडौँ, असार १६ गते । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बझाङबाट विजयी यात्रा सुरु गरेका छन् । पहिलो मत परिणामका रूपमा काँग्रेसले बझाङको काँडा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा विजय हासिल गरेको छ । अध्यक्षमा काँग्रेसका राजेन्द्र बोहोरा र उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै कल्पना बोहोरा विजयी हुनुभएको हो । सोलुखुम्बुको लिखुबिके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाा माओवादी केन्द्रका डम्बरबहादुर बस्नेत र उपाध्यक्षमा केन्द्रकै प्रमिला बस्नेत विजयी हुनुभएको छ । यस्तै, एमालेले पनि बझाङबाट खाता खोलेको छ । मस्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा एमाले विजयी भएको हो ।
अध्यक्षमा एमालेका कर्णबहादुर कठायत र उपाध्यक्षमा भगवती बोहोरा विजयी हुनुभएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहीबार राति ११ बजेसम्म ३०७ स्थानीय तहको मतगणना सुरु भएको छ । ३३४ मध्ये अन्य २७ स्थानको मतगणना भने सुरु भएको छैन । उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट मतपेटिका सङ्कलन भइरहेका कारण मतगणना सुरु नभएको आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । बुधबार मतदान स्थगित भएका रूपन्देही जिल्ला कोटहिमाही गाँउपालिका वडा नं. १ र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ३ को पाण्डु मा.वि. मतदान केन्द्रमा शुक्रबार मतदान हुने कार्यक्रम छ । आयोगले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहको बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा ७३.६९ प्रतिशत मतदान भएको पनि जनाएको छ । आयोगले बुधबार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ७०.५ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश नं १ मा ७२.४९, प्रदेश नं ५ मा ७५.३४ र प्रदेश नं ७ मा ७३.०५ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
केन्द्रीय अनुगमन टोली यसैबीच निर्वाचन आयोगले मोरङ र सुनसरीमा मतगणना अनुगमनका लागि केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएको छ । आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दुवै जिल्लामा केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएको हो । टोलीमा आयोगकै उपसचिव (कानुन) कृष्णराज खनाल रहनुभएको छ । टोलीले मोरङ र सुनसरी जिल्लाका मतगणना स्थलहरूको अनुगमन गरी तीन दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।